Kurumidza kuchaja iyo iPhone muLinux ichakurumidza kuve chokwadi | Linux Vakapindwa muropa
Apple inoita kufamba kunoshamisa kwazvo. Kana zvine musoro, kana isu tichifunga kuti ikambani uye ivo vanofunga nezvekuita purofiti. Kunyangwe iyo iPhone yaienderana neyekuchaja kubhadharisa kwezvizvarwa, izvo kunyangwe iyo iPhone 11 Pro inosanganisirwa mubhokisi yaive machena majaja. Ivo vachiri havabatanidze induction kuchaja rutsigiro, asi zvirinani ivo vanosanganisira mamwe 5W majaja ayo anotora mukana weiyo iPhone inokurumidza kubhadharisa. Ehezve, kuti ikwanise kuitakura nekombuta, inofanira kunge ichienderana nehunyanzvi.
Dzimwe shanduko hombe kuLinux dzinouya pamusoro pemwedzi miviri yega yega, apo Linus Torvalds inoburitsa nyowani nyowani kune kernel yaanogadzira. Pari zvino Linux 5.6 yatove pasi pekuvandudzwa, asi inotevera vhezheni, Linux 5.7, ichawedzera rutsigiro rwekuchaja nekukurumidza kweiyo iPhone, kana kunyanya zveiOS zvishandiso. IPad inoshandisa charger 24W uye yemberi vhezheni yeLinux kernel inozotsigirawo ma loaders aya.
Kukurumidza kuchaja kweiyo iPhone kunotsigirwa muLinux 5.7
Parizvino, kana tikabatanidza chishandiso cheApple kukombuta yeLinux, yakanakisa yatinogona kutarisira kuibhadharisa nesimba re500mA, iyo inononoka zvikuru kana ichienzaniswa nemari inodiwa kuti ifungiswe nekukurumidza. Kana Linux 5.7 yaburitswa zviri pamutemo, Apple zvishandiso zvinokwanisa kubhadhariswa nesimba rinosvika 2500mA, iro rinoshandura kuita 5 times nekukurumidza kuchaja kumhanya anenge.
Chii chichagonesa kumhanyisa kuchaja kwe iPhone ne iPad muLinux 5.7 ndiyo mutyairi apple-mfi-fastcharge («MFi inomiririra« Made For iPhone »), izvo zvinotibvumidza isu kumisikidza mutyairi kuti amise mutoro uchishandisa sysfs.
Linux 5.7 haisati yatanga kusimudzira, asi ichauya iyi chitubu, iyo 31 yaMay Kana pasina chinodzokera mukuvandudzwa kweLinux 5.6 kana muiyo kernel vhezheni iyo ichatibvumidza kurodha Apple zvishandiso kutora mukana wavo wekukurumidza kurodha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Munguva pfupi inotevera tichakwanisa kutora mukana wekuchaja nekukurumidza kweiyo iPhone zvakare muLinux
Aldo e gonzalez akadaro
Uye Android whatsUp.
uye ne Android chii chichaitika?
Ndatenda, NDINI weLinus's Fan.
Pindura kuna Aldo E Gonzalez